Mamorona bilaogy amin'ny tananao | Polyblog
Mamorona bilaogy amin'ny tananao
Polyblog dia manampy anao hamorona bilaogy amin'ny fiteny maro sy hampitombo ny orinasanao amin'ny marketing votoaty.
Nahoana no mampiasa polyblog?
1. Haingana sy maivana
Ny hafainganam-pandeha sy ny fahombiazana dia zava-dehibe ho an'ny orinasa rehetra. Azonay izany ary noho izany dia nanangana sehatra iray izahay izay manafaingana ny fizotran'ny varotra votoaty manontolo.
2. Adikao mora foana ny atiny
Kendreo ny firenena rehetra sy ny fiteny rehetra ary ampitomboy ny orinasanao eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Amin'ny alàlan'ny Rafitra fitantanana votoaty ananay dia afaka mitantana mora foana ny blôginao amin'ny fiteny maro ianao eo ambanin'ny dashboard tokana.
3. Famolavolana minimalista
Mino ny fahatsorana izahay. Izany no antony hanaovanay ny blôginao ho madio sy tsotra amin'ny famolavolana. Ity misy santionany amin'ny endriky ny blôginao rehefa manangana azy amin'ny Polyblog ianao.
SEO no vato fehizoron'ny ezaka rehetra momba ny varotra votoaty. Tena zava-dehibe amin'ny bilaogy rehetra ny fahazoana fifamoivoizana fikarohana organika avy amin'ny Google. Izany no antony nandanianay loharano maro mba hahatonga ny blôginao ho namana SEO.
5. Fampiantranoana tantana tanteraka
Tsy mila miatrika ny aretin'andoha amin'ny fitantanana ny mpizara anao. Manome fampiantranoana tranonkala faran'izay haingana sy azo antoka izahay.
Zava-misy mahaliana sasany momba ny varotra votoaty
“77 isan-jaton'ny olona mamaky bilaogy an-tserasera tsy tapaka”
“Ny 67 isan-jaton'ny bilaogera mandefa isan'andro dia milaza fa mahomby izy ireo”
“61 isan-jaton'ny mpampiasa aterineto any Etazonia no nividy zavatra rehefa avy namaky bilaogy”
Ahoana no hanombohana
1. Misoratra anarana ary amboary
Misoratra anarana amin'ny Polyblog ary ampidiro ny Polyblog amin'ny tranokalanao. Mila miditra ny adiresy mailakao sy ny sahan-tranonkalanao ianao.
2. Ampio lahatsoratra
Rehefa vonona ny lahatsoratrao dia azonao ampidirina ao amin'ny blôginao amin'ny alàlan'ny dashboard Polyblog. Rehefa mamoaka azy ireo ianao dia handeha mivantana ao amin'ny blôginao ny atiny.
3. Araho ny fitomboanao SEO amin'ny console fikarohanao
Hikarakara SEO ara-teknika ho anao izahay. Hamorona sarintany ho azy izahay ary hampakatra azy ireo ao amin'ny Google Search Console-nao. Ny hany ilainao dia ny manara-maso ny fitomboanao ao amin'ny Google Search Console.
Afaka mampiasa sehatra manokana ve aho?
Eny, azonao atao ny mampiasa sehatra manokana miaraka amin'ny drafitray rehetra. Tsy maintsy mametraka ny sehatra misy anao amin'ny rafitray ianao.
Inona no maha samy hafa ny Polyblog sy ny rafitra fitantanana votoaty hafa?
Polyblog dia natao manokana ho an'ny fitantanana votoaty amin'ny fiteny maro. Betsaka ny tombony azo amin'ny marketing votoaty amin'ny fiteny maro nefa sarotra ny mampihatra izany matetika. Manamora ny fitantanana sy fampiroboroboana bilaogy amin'ny fiteny maro ny Polyblog.
Tsy maintsy manatsara ny bilaogiko ho an'ny hafainganan'ny pejy sy ireo anton-javatra SEO ara-teknika hafa ve aho?
Tsy izany velively, Polyblog dia efa namboarina ho an'ny anton-javatra SEO ara-teknika rehetra toy ny hafainganam-pandehan'ny pejy, ny rafitry ny rohy, ny sitemap, ny meta tags, ary ny maro hafa.
Ho an'iza ny Polyblog?
Polyblog dia natao manokana ho an'ireo vao manomboka maniry bilaogy haingana sy mandray andraikitra amin'ny fanombohana ny diany ara-barotra votoaty.
Mila mametraka plugins sy lohahevitra ve aho?
Ny Polyblog dia efa tonga miaraka amin'ny lohahevitra madio, mandray andraikitra ary ny endri-javatra rehetra ilainao dia efa napetraka mialoha. Amin'izany fomba izany dia afaka manomboka avy hatrany amin'ny blôginao ianao ary mifantoka mazava amin'ny famoahana votoaty avo lenta nefa tsy manahy loatra amin'ny lafiny teknika.
Azonao atao ve ny mampiseho ahy ohatra momba ny bilaogy iray namboarina tamin'ny Polyblog?
Azo antoka, jereo ny bilaogin'ny iray amin'ireo mpanjifanay ambony: https://www.waiterio.com/blog
Soraty ho anay ny teny hoe Hello